Ekhaya | Wanzhanxing Apparel
I-Tank eyakhulelwe i-tops kunye neCamisole
Ingubo yokutsala ekhulelwe
Ihowuliseyili shapewear umenziI-OEM&I-odm
Wanzhanxing nezambatho yeyona ilungileyo shapewear umenzi, sigqalisela yangaphantsi ingenamthungo, shapewear, isiko activewear, slip ilokhwe kunye neemveliso maternity lemveliso. iimveliso zethu ziquka isiliphu shapewear isinxibo, shapewear Thong, panties ulawulo, shapewear bodysuit, bra ezemidlalo kunye leggings emidlalo. Ukongezelela, singakwazi ukubonelela ODM& inkonzo OEM.
I-WZX yabagcini bomthengisi we-wummy yolawulo lwe-tummy
I-Wiist Saiaring yoMqhubi oGqibeleleyo we-Felbear Slimby ephakathi kwi-Toper Shap Shap Shap Shap SurterbearLo mzimba we-shaper osemzimbeni wenziwe ngomgangatho ophakamileyo we-elastic, i-silky, ilaphu elithambileyo, kunye nelaphu eliphefumlayo, i-Corset Leotards ye-veloard kunye ne-spandex. Le bhodi eqhelekileyo inokuthi inxibe imini yonke, ibumba ngokulula esinqeni esifanelekileyo, sikunike i-curve ye-hip, ikunike i-curve ye-curve ye-wiprier, kwaye ungenzi ukuba umzimba wakho ungabinamanzi okanye amaqhekeza omzimba Umzobo, usenza umdla.
I-WZX yabasetyhini yoxinzelelo lwe-WUMMY ukulawula i-bodyssuit ye-bodysysuit ye-Wholedale Sholedaar
I-Wiist Saist Shiciaring Bodysyssuit i-Slim ye-Slim ye-Suby Sheam seam ye-seamper ye-sexy ye-leotird bolulaI-Sleevesssuit yabasetyhini isebenzisa i-craftsmannip ekhethekileyo yenza uxinzelelo oluqinileyo kwinxalenye ephakathi, isonge isinqe& isisu& Buyela umva, qinisa i-tummy yakho kwaye uyibuyise kakhulu, ikwanokufihla iibhulukhwe kunye ne-buck kumacala omabini ukuya esinqeni sakho, kukunika inani elihle. Eli bodysuit elingenamthubi kubafazi abane-bra nguyilo olusezantsi lwentamo ye-V-Vile, ikholam yakho, amabele, kunye nobuso bungazi kakuhle. I-top ye-top engenamkhono inokunxiba nge-bra oyithandayo, enceda ekuphakamiseni umgca wesifuba kwaye ibonisa ubume be-sely ye-setyglass.
I-wzx matern yokufakelwa i-sharper inqabile ngaphezulu kwe-OEM ye-OEMO
I-Sheedy ye-Sheaid ye-Mana ye-Sweewer ye-SweedleLe makhwenkwe lemithumbo yokukhulelwa ngaphandle kwe-Widerts Showwerts Syport ibonelela ngetyhefu egudileyo, ngasemva, i-opaque enesisu kunye ne-SEFOCK, kunye ne-comfy yegumbi elinegumbi elaneleyo kukhula. Ithambile nenobuhlobo ye-nylon ye-nylon ye-nylon eluhlaza engabonakaliyo engabonakaliyo kwingubo yokukhulelwa, ikhuselekile kwimpilo yokukhulelwa. Umama unokuyinxiba ngalo naliphi na ixesha elibalulekileyo, ishawari yomntwana, i-phyhoot ye-storehoot, kunye nokunxiba imihla ngemihla.
I-WZX yabasetyhini abagqibeleleyo baguqukayo be-spaghetti starple ye-omer omem
Isiliphu esipheleleyo sabafazi abaphantsi kwengubo eguqukayo i-spaghetti spap yedolo yedolo ye-GoneEsi sinxibo se-tunic senziwe ngokukhanya kwe-bane, senzelwa ilaphu lendwangu ligudileyo kwaye ligcuma. Phantse akunakwenzeka ukuba uxhathise ii-vibes ezipholileyo ze-vibes ezingapheliyo zehlobo. Uyilo lwayo oluthandekayo lwehlobo lehlobo eline-turdy spaghetti spaghetti spaphetti bicle ukubonisa umboniso, kwaye uyilo lwe-pillal lungeze ubuchule kwaye aluyi kubona. Isitayile seklasikhi: Isitayile esithe tye silungele amanani abantu abaninzi, kwaye isiseko solwandle esisiseko sedolophu sigqibelele kangangezihlandlo ezininzi.
inkonzo ulwenziwo Brand
Iinkonzo Design / mini-7 imveliso zokufunda kwakhona ekhawulezayo / Plus-ubukhulu / Environmental ukhuseleko bokudaya / yoshicilelo LOGO Private / Fast delivery / iqela unxibelelwano Professional
Wanzhanxing isambatho CO. LTD. i BSCI mveliso eqinisekisiweyo. Sinikeza abathengi bethu premium ingenamthungo shapewear bodysuit, yangaphantsi basic mihla, siko activewear, shapewear kakhulu isisu kunye esinqeni kunye neemveliso maternity oluzinzileyo, ukudibanisa inkonzo yabathengi-class ehlabathini. Sinikeza ngeenkonzo zoyilo kunye yenza ngokuvisisana isicelo lwabathengi kunye neqela unxibelelwano yobungcali.
Product thina eveliswayo sonke bokudaya ukhuselo lokusingqongileyo.
Sinako ukwenza imihla-7 zokufunda kwakhona ngokukhawuleza kunye noshicilelo LOGO zabucala.
Ngaba ufuna ukuba a best shapewear umenzi? Apha nathi, nceda thumela i email okanye Whatapp kunye umntu kwiqela lethu liya kubuyela kuwe kwiiyure ezili-12.
Lo mzi-mveliso uye certification BSCI. Le ntambo iye certification OEKO-Enomxholo Perl Indawo.
Iqela Professional RD
Iqela professional kudala nendlela engcono iimveliso shapewear bodysuit kunye customizes ezenziwe iibrand kubathengi.
oomatshini ingenamthungo ngokobungakanani ezininzi
workshop engenan- xibelelwano 12 intshi - 19 inch SANTONI koomatshini. Inokuvelisa ngobukhulu kunye neemveliso ubukhulu plus.
amandla emveliso ezoneleyo kunye nonikezelo fast.
Ngaphezu kweminyaka elishumi amava mveliso kumazwe angaphandle.
Wanzhanxing isambatho CO. LTD.
Wanzhanxing isambatho CO. LTD. na umenzi shapewear yobungcali, ahlanganise indawo 13.500 square metres, kunye amandla emveliso ezaneleyo kunye nonikezelo nokufika ngexesha. Siye ukuhlinzeka OEM&Iinkonzo ODM kubathengi abasuka kulo lonke ihlabathi, USA, UK, CA, AU, DE kunye Korea, ect.
Lo mzi-mveliso unyanzelisa ingcamango ukhuselo indalo esingqongileyo xa usebenzisa ubuchwepheshe eziphambili ukubonelela ngeenkonzo ukuze brand yakho:
1. Ikomiti Uyilo senior abazahluleleyo, ngokubonelela uyilo shapewear bodysuit ezimeleyo nemini-7 zokufunda kwakhona ngokukhawuleza.
2. workshop engaqukunjelwanga Intelligent, nge-12 intshi -19 intshi koomatshini SANTONI yayithengwe Italy.
3. Usebenzisane NILIT lophawu, umxhobisi oko-tex100 eqinisekisiweyo vulu.
4. bokudaya Environmental nempahla seamless tayi-bokudaya.
5. Custom inkonzo yakho brand ziquka Logo, ukupakisha, Logo tag, ect.
6. Iqela lenkonzo yomxhasi Professional inikezela ngenkonzo efanelekileyo.
Thina nomakhi shapewear yobungcali. "Innovation, Efficiency, Ingqibelelo" na imfundiso inkonzo kunye nenkcubeko yequmrhu yenkampani yethu.
Sijonge phambili kwintsebenziswano ngokunyanisekileyo kunye nawe.
Yenzelwe wena ukuthambekela olungenazimfanta yangaphantsi / ihoseyile shapewear bodysuit / siko activewear yakutshanje.
WZX Uthuli-Free Ukufuma-Ubungqina Warehouse Real Bonisa Shapewear Inkampani
WZX i mveliso BSCI ezikhethekileyo ukurhweba kumazwe amaninzi ehlabathini jikelele iminyaka eli-16, abe womnatha yokuthengisa lwehlabathi kunye noluhlu olubanzi iinkonzo equka Wholesalers, abathengisi, kwaye brand kulo lonke ihlabathi amazwekazi 7 kunye namazwe 53.Le vidiyo malunga mveliso wethu mihla bapakishe, lo yokugcina na uthuli-free nokufuma-ubungqina. xa izinto kudlule zonke uhlolo, baya kuziswa ukuba eli sebe ukupakisha kunye lokuthumela.Ngaba ufuna ukuba umenzi iimveliso shapewear, yangaphantsi, okanye kubeleka yabasetyhini?Khangela kusaba. Wena kwindawo elungileyo!
WZX nokujika yangaphantsi nomakhi Factory kuyintoTop Shapewear Companies kunye Suppliers Shapewear Ulwenziwo lokuthile.Oku ividiyo senkqubo-ayina, abasebenzi yethu yokusebenza nzima kumasifundisane ngasemva.Sinento inkqubo isampulu esisiseko kakhulu kwiimveliso zethu shapewear, yangaphantsi, activewear, kunye kubeleka.Sixhasa inkonzo isiko isampuli njengoko kuyilo isiko nokunika inkonzo brand olunye-stop.Efuna ukuvelisa iimveliso ophezulu imfanelo esenza ukufumana impumelelo. Kwaye singathanda ukufumana impumelelo kunye nawe.
I-wzx isampulu yoyilo lwenkqubo yenkqubo yesitayile sesiko le-OEM ODM I-ODM DEAMFRE
Xa sifumana uyilo lwakho, siya kuqwalasela uyilo ukubona ukuba ziphakathi kwezakhono zethu zeMveliso. Ukuba yinto esinomdla kuyo kwaye uyasamkela isicatshulwa sethu, inyathelo elilandelayo yinkqubo yesampulu. I-chef yethu iya kuyilwa ngokwesiko kwikhompyuter ukuba ize nenkqubo yemveliso, iya kuthi ke iqhagamshela umatshini, umatshini ongenamthungo uya kuvelisa imveliso ngokuxhomekeke kwinkqubo, isampulu yokuqala iphakama.Abavelisi be-Wholedale Pinerwere, abaThengi be-Wholesale Sholeser, i-WZX ye-WZX
WZX Fast Ndihlangule Good Package Prodessional nomakhi
Sicela abenzi zobungcali kunye nabathengisi eChina ezikhethekileyo ekuboneleleni ezikumgangatho ophezulu iimveliso elungelelanisiweyo.Isebe nokupaka iqulathe ngaphezulu kwama-70 abasebenzi abanamava.ukuhlolwa inaliti ziya kuqhutywa phambi zonke iimpahla kweebhokisi ukuqinisekisa ukuba akukho iimveliso metal kuzo zonke impahla kweebhokisi ukuqinisekisa ukhuseleko iimpahla.Thina izisombululo egqibeleleyo yonke imiba yenkqubo ukwaluka: imveliso order, ukuthuthwa eziphathekayo, ubuchwepheshe ukwaluka, kunye nokugcinwa umatshini.Ngenxa Shapewear Manufacturers Ihowuliseyili, akukho sithintelo, ukhululekile ukuba ukunxiba, ixabiso elifanelekileyo ukuze lokushiywa.va ukhululekile imibuzo!
Ukuba Imibuzo, Bhala To Us